1 TIMỌTI 1 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (1TI 1)
1 TIMỌTI 1
Mụ onwe m Pọl, onye Chineke Onye nzọpụta anyị, na Kraịst Jisọs, onye bụ olileanya anyị họpụtara zipụ ịbụ onyeozi Kraịst, na-edegara gị akwụkwọ a.
Dị ka m rịọrọ gị ka ị nọgide nꞌEfesọs mgbe m hapụrụ gaa Masidonia, nọgidekwa nꞌebe ahụ. Nꞌihi na achọrọ m ka i mee ka ụfọdụ mmadụ nọ nꞌEfesọs kwụsị ozizi ụgha ha.
Mee ka ha kwụsị ịkọ ogologo akụkọ, na inyocha ihe gbasara usoro ọmụmụ dị iche iche nke na-adịghị agwụ agwụ. Nꞌihi na ihe ndị a na-eweta ajụjụ na ịrụ ụka na-abaghị uru, kama inyere ndị mmadụ aka ịnabata ụzọ ahụ Chineke kwadoro site nꞌokwukwe.
Nꞌihi na ndị ozizi ụgha ahụ esitela nꞌokwukwe anyị wezụga onwe ha. Ha nọ ugbu a na-atụfu oge ịjụ ajụjụ na ikwu okwu nzuzu.
Ha chọrọ ịbụ ndị a maara aha ha dị ka ndị ozizi iwu Mosisi, ma ha amaghị ihe iwu ahụ naegosi anyị.
Ma anyị maara na iwu Chineke dị mma, ma ọ bụrụ na onye ọ bụla ewere ya mee ihe Chineke chọrọ ka e jiri ya mee.
Ee, Chineke nyere iwu a ime ka ndị naakwa iko pụta ìhè dị ka ndị mmehie. Ha na ndị na-eche uche na-adịghị ọcha, na ndị ikom na-emerụ onwe ha nꞌebe ndị ikom ibe ha nọ, ndị na-eme ihe ọjọọ dị iche iche megide ezi ozizi na-eweta ndụ.
Nꞌezie, ndị nile naemegide ozi ọma ebube Chineke ahụ e nyere m nꞌaka idebe.
Ọ bụ ezie na nꞌoge gara aga ekwuru m okwu ọjọọ megide Kraịst, meekwa ndị na-eso ụzọ ya ihe ihere. Ma Chineke meere m ebere nꞌihi na amataghị m ihe m na-eme mgbe m na-eme ihe ndị a. Nꞌihi na amaghị Kraịst nꞌoge ahụ.
Ugbu a, Timoti nwa m, iwu a ka m na-enye gị nꞌaka idebe. Lụsie ọgụ okwu Onyenwe anyị ike, dị ka Onyenwe nꞌonwe ya si nye anyị iwu ka anyị, lụọ ya site nꞌọnụ ndị amụma ya.
Jidesie okwukwe i nwere nꞌime Kraịst ike. Meekwa ka akọnuche gị dị ọcha mgbe nile. Nꞌihi na ụfọdụ mmadụ eleziela anya jụ ime ezi ihe akọnuche ha gwara ha. Ma ha emeela ihe ahụ ha maara na ọ jọrọ njọ. Ugbu a ọ bụghị ihe iju anya na ha esitela nꞌokwukwe anyị dapụ.
Haimeniọs na Alegzanda bụ ndị ikom abụọ mere ụdị ihe a. Ewerela m ha nyefee ekwensu nꞌaka, ka ọ taa ha ahụhụ tutuu ruo mgbe ha mụtara na ha ekwesịghị ikwu okwu ọjọọ megide Chineke.
1 TIMỌTI 1:1
1 TIMỌTI 1:3
1 TIMỌTI 1:6
1 TIMỌTI 1:7
1 TIMỌTI 1:8
1 TIMỌTI 1:11
1 TIMỌTI 1:13
1 TIMỌTI 1:18
1 TIMỌTI 1:20